ILUNGISELELA I-ASUS RT-N12 D1 ROUTER YE-BEELINE + VIDEO - INETHIWEKHI NE-INTANETHI - 2019
Main Inethiwekhi ne-intanethi
Ilungiselela i-Asus RT-N12 D1 router ye-Beeline + Video
Sekuyisikhathi eside ngibhala indlela yokulungisa umzila we-ASUS RT-N12 ongenazintambo we-Beeline, kodwa-ke babe amadivaysi ahlukene kancane futhi ahlinzekwa ngenye indlela ye-firmware, ngakho-ke inqubo yokucubungula ibheka kancane.
Okwamanje, ukubuyekezwa kwamanje kwe-Wi-Fi router ASUS RT-N12 yi-D1, futhi i-firmware engena kuyo esitolo i-3.0.x. Sizocabangela ukusetha le divayisi ethile kule nqubo yesinyathelo ngesinyathelo. Ukusetha akuxhomeki kuhlelo luni lokusebenza onalo - Windows 7, 8, Mac OS X noma enye into.
I-ASUS RT-N12 D1 i-Wireless Router
Ividiyo - Ilungiselela i-ASUS RT-N12 Beeline
Kungase kube usizo:
Isetha i-ASUS RT-N12 kunguqulo endala
I-ASUS RT-N12 Firmware
Okokuqala, ngiphakamisa ukubuka imfundo yevidiyo futhi, uma kukhona okungaqondakali, ngezansi zonke izinyathelo zichazwe ngokuningiliziwe ngokufometha kombhalo. Kubandakanya kukhona ukuphawula ngamaphutha ajwayelekile lapho uhlela i-router nezizathu ezingase zingatholakali nge-intanethi.
Ukuxhuma umzila ukuze ulungiselele
Naphezu kokuthi ukuxhuma i-router akuyona inzima kakhulu, uma kungenzeka, ngizoyeka lapha. Ngemuva kwe-router, kunezingxenyana ezinhlanu, enye yazo iluhlaza okwesibhakabhaka (i-WAN, i-Inthanethi) nabanye abane baphuzi (i-LAN).
Ikhebula le-Beeline ISP kufanele lixhunywe ku-port ye-WAN.
Ngincoma ukusetha i-router ngokwayo uxhumano oluthile, lokhu kuzokulondoloza ezinkingeni eziningi ezingenzeka. Ukwenza lokhu, xhuma enye yamapayipi e-LAN ku-router kumakhansela ekhadi le-network yekhompyutha noma i-laptop ngekhebula elifakiwe.
Ngaphambi kokulungisa i-ASUS RT-N12
Ezinye izinto ezizosiza ekucwangcisweni okuphumelelayo nokunciphisa inani lezinkinga ezihlobene nalo, ikakhulukazi kubasebenzisi be-novice:
Noma ngesikhathi sokusetha noma emva kwayo, ungaqali ukuxhumeka kwe-Beeline kwikhompyutha (leyo evame ukusetshenziselwa ukufinyelela i-intanethi), ngaphandle kwalokho, lo router ngeke ukwazi ukusungula uxhumano oludingekayo. I-intanethi ngemuva kokusetha izosebenza ngaphandle kokusebenzisa i-Beeline.
Kungcono uma ulungisa i-router ngokusebenzisa uxhumano lwe-wired. Futhi xhuma nge-Wi-Fi uma yonke into isethiwe.
Uma kungenzeka, iya kuzilungiselelo zokuxhumeka ezisetshenziselwa ukuxhumana nomzila, futhi qiniseka ukuthi izilungiselelo zeprothotholo ye-TCP / IPv4 isethwe ku- "Thola ikheli le-IP ngokuzenzakalelayo futhi uthole ikheli le-DNS ngokuzenzekelayo." Ukuze wenze lokhu, cindezela okhiye be-Win + R ekhibhodi (i-Win key ne-Windows logo) bese ufaka umyalo ncpa.cplbese ucindezela u-Enter. Khetha ohlwini lokuxhumeka okuxhumeke kuyo ku-router, isibonelo "Ukuxhumeka Kwendawo Yendawo", uchofoze ngakwesokudla kuso bese ukhetha "Properties". Bese-bona isithombe ngezansi.
Indlela yokufaka amasethingi e-router
Faka i-router ibe yi-outlet yamandla, ngemva kokucabangela zonke izincomo ezingenhla. Emva kwalokhu, kuzohlukahluka izenzakalo ezimbili: akukho lutho olwenzekayo, noma ikhasi lizovuleka njengalesi sithombe esingezansi. (Ngesikhathi esifanayo, uma usuvele ukhona kuleli khasi, lizovula ngokungafani, ngokushesha uqhubekele esigabeni esilandelayo semfundo). Uma, njengami, leli khasi lizoba ngesiNgisi, awukwazi ukushintsha ulimi ngalesi sigaba.
Uma ingavulwa ngokuzenzakalelayo, qalisa noma yisiphi isiphequluli bese uthayipha ibha yekheli 192.168.1.1 bese ucindezela u-Enter. Uma ubona isicelo sokungena ngemvume nephasiwedi, faka umphathi kanye nomqondisi kuzo zombili izinkambu (ikheli elicacisiwe, ukungena ngemvume nephasiwedi kubhalwe kwisitika ngezansi kwe-ASUS RT-N12). Futhi, uma ukhona ekhasini elingalungile engishilo ngenhla, hamba ngqo esigabeni esilandelayo sencwadi.
Shintsha iphasiwedi yomlawuli ASUS RT-N12
Chofoza inkinobho ethi "Hamba" ekhasini (ngenguqulo yaseRussia ukubhaliswa kungahluka). Esikhathini esilandelayo, uzothunyelwa ukuba ushintshe iphasiwedi yokuzenzakalelayo yokulawula okuthile okuhlukile. Yenza lokhu futhi ungakhohlwa iphasiwedi. Ngizoqaphela ukuthi leli phasiwedi kuzodingeka ukuze ufake izilungiselelo zomzila, kodwa hhayi nge-Wi-Fi. Chofoza Okulandelayo.
I-router izoqala ukucacisa uhlobo lwenethiwekhi, bese inikela ukufaka igama le-network wireless SSID futhi ufake iphasiwedi ku-Wi-Fi. Faka nabo bese uchofoza okuthi "Faka isicelo". Uma usetha router phezu uxhumano wireless, kuleli phuzu uxhumano luzophuka futhi kuzodingeka uxhume inethiwekhi wireless nezilungiselelo ezintsha.
Ngemuva kwalokho, uzobona ulwazi mayelana nokuthi yimaphi amapharamitha asetshenzisiwe futhi inkinobho ethi "Okulandelayo". Eqinisweni, i-ASUS RT-N12 ithola ngendlela engalungile uhlobo lwenethiwekhi futhi kufanele ulungiselele ukuxhumana kwe-Beeline ngesandla. Chofoza Okulandelayo.
Ukusetha kokuxhumeka kwe-Beeline ku-Asus RT-N12
Ngemuva kokuchofoza okuthi "Okulandelayo" noma ngemva kokungena kabusha (ngemuva kokuthi ususebenzise ukulungiswa okuzenzakalelayo) ukungena kwekheli 192.168.1.1 uzobona ikhasi elilandelayo:
I-ASUS RT-N12 ikhasi lezilungiselelo eziyinhloko
Uma kunesidingo, uma, njengami, isikhombimsebenzisi sewebhu asikho ngesiRussia, ungashintsha ulimi ekhoneni elingakwesokudla.
Emenyu ngakwesobunxele, khetha "I-Inthanethi". Ngemuva kwalokho, setha izilungiselelo ezilandelayo zokuxhumeka kwi-intanethi kusuka ku-Beeline:
Uhlobo lwe-WAN uxhumano: L2TP
Thola ikheli le-IP ngokuzenzakalelayo: Yebo
Xhuma kwisiphakeli se-DNS ngokuzenzakalelayo: Yebo
Igama lomsebenzisi: i-Beeline yakho yokungena, iqala ngo-089
Iphasiwedi: I-Beeline yephasiwedi yakho
Iseva ye-VPN: tp.internet.beeline.ru
Izilungiselelo zokuxhumeka kwe-Beeline L2TP ku-ASUS RT-N12
Futhi chofoza okuthi "Faka isicelo". Uma zonke izilungiselelo zingeniswe ngendlela efanele, futhi ukuxhumeka kwe-Beeline kwikhompyutha ngokwayo kuphukile, bese emva kwesikhathi esifushane, ungena ku "I-Network Map", uzobona ukuthi isimo se-intanethi "Sixhunyiwe".
Ukusetha kwenethiwekhi ye-Wi-Fi
Ungase wenze izilungiselelo eziyisisekelo zezilungiselelo zenethiwekhi ezingenantambo zomgwaqo esiteji sokumiswa okuzenzakalelayo kwe-ASUS RT-N12. Noma kunjalo, nganoma isiphi isikhathi ungashintsha iphasiwedi ye-Wi-Fi, igama lenethiwekhi nezinye izilungiselelo. Ukuze wenze lokhu, vula uvule "Inethiwekhi Engenantambo".
I-SSID - noma yiliphi igama elifunayo lenethiwekhi engenazintambo (kodwa hhayi i-Cyrillic)
Indlela Yokuqinisekisa - WPA2-Ubuntu
Iphasiwedi - okungenani izinhlamvu ezingu-8
Isiteshi - ungafunda mayelana nokukhetha kwesiteshi lapha.
Izilungiselelo zokuphepha ze-Wi-Fi
Ngemuva kokusebenzisa izinguquko, zigcine. Yilokho konke, manje ungakwazi ukufinyelela i-intanethi kunoma iyiphi idivayisi enesimo se-Wi-Fi ngokuxhuma kwinethiwekhi yakho engenantambo.
Qaphela: ukulungisa ithelevishini ye-Beeline ye-IPTV ku-ASUS RT-N12, iya ku-"Inethiwekhi yendawo yenethiwekhi", khetha ithebhu ye-IPTV bese ucacisa ichweba lokuxhuma ibhokisi lokusetha.
Kungase futhi kufinyeleleke: izinkinga ezijwayelekile uma uvula umzila we-Wi-Fi
Ama-Brake kanye nama-friezes
https://termotools.com zu.termotools.com © Inethiwekhi ne-intanethi 2019